Puntland oo magdhow siinaysa qoyska gabadhii lagu dilay Garoowe | Dhacdo
Home Wararka Maanta Puntland oo magdhow siinaysa qoyska gabadhii lagu dilay Garoowe
Puntland oo magdhow siinaysa qoyska gabadhii lagu dilay Garoowe
Puntland ayaa sheegtay in ay magdhow siin doonto qoyska gabadhii dhallinyarada ahayd, ee ay xalay ciidamadeeda ku toogteen Magaalada Garoowe ee Xarunta Gobolka Nugaal.
Ciidanka Ilaalada Madaxtooyada Puntland ayaa xalay rasaaseeyay gaari ay la socotay gabadhaasi, xilli wadada uu marayay Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni.
“Gabadhaasi waxay ku dhammaatay kiiskeedii Dowladda Puntland oo qaadatay masuuliyadda, qaabishayna dadka ehelka ah. Dadkaasi wixii ay xuquuq u yeeshaan dowladda ayaa bixineysa.” Ayuu yiri Taliyaha.
Previous articleMadaxweynaha Puntland oo qaabilay Safiirka Ingiriiska (SAWIRRO)
Next articleAxmed Madoobe “Doorashada ma dhici karto inta mindida daabkeeda la haysto”